सरकारद्वारा जनस्वास्थ्य विपद् घोषणाको तयारी – kalikadainik.com
सरकारद्वारा जनस्वास्थ्य विपद् घोषणाको तयारी
शुक्रबार, जेठ २३, २०७७ | ७:१६:५३ |
काठमाडौं, २३ जेठ । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट तीन सातामा १० जनाको मृत्यु भएको र संक्रमितको संख्या २५ सय नाघेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मुलुकमा जनस्वास्थ्य विपद् घोषणाका लागि आवश्यक गृहकार्य गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि मुलुकमा आपत्काल लागू हुनेछ। आपतकालको आदेश जारी भएपछि अत्यावश्यक सामग्री खरिदमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने बाध्यता हुने छैन। सरकारले निजी क्षेत्रको अस्पताल र अरू सम्पत्ति आफूले चाहेअनुसार परिचालन गर्न घोषणाबाट मद्दत पुग्नेछ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले विपद् घोषणाका लागि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्ने जनाएको छ। जनस्वास्थ्य विपद्को प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने निर्णय गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले जानकारी दिए। ‘संक्रमितका साथै मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढिरहेकाले पब्लिक हेल्थ इमरजेन्सी घोषणाको प्रस्ताव पारित गर्न मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने निर्णय भएको छ,’ उनले भने।
उनले भने, ‘संक्रमितको संख्या बढिरहेको अवस्था र मृत्युको खबर पनि नचाहँदा नचाहँदै बढिरहेका बेला हेल्थ सेक्टरको इमरजेन्सी रेस्पोन्स प्लान बनाएका थियौं। जो कोरोना पाण्डेमिकसँग सम्बन्धित थियो। त्यसमा कोभिड हेल्थ इमरजेन्सी घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था राखिएकाले त्यहीअनुरूप छलफल चलाइएको थियो। त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुनका लागि प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेका छौं। प्रस्ताव जाँदै छ। स्वीकृति भइसकेको छैन।’
विपत्को घोषणा गर्दा एक जना उच्च तहका अधिकारी तोक्नुपर्ने प्रावधान छ। त्यसका लागि मन्त्रालयले स्वास्थ्य सचिवलाई तोकेको छ। आपतकालीन अवस्थामा तत्कालै स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउन दु्रत प्रतिकार्य टोली तथा आपतकालीन चिकित्सकीय समूह रहनेछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आपतकालीन स्वास्थ्य योजना विकास गरी लागू गर्नुपर्ने जनस्वास्थ्य सेवा ऐनमा उल्लेख छ।
मुलुकका सात वटै प्रदेशका ६५ जिल्लामा कोरोना संक्रमण फैलिसकेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. देवकोटाका अनुसार हालसम्म संक्रमितको संख्या २ हजार ६ सय ३४ पुगेको छ। जसमध्ये पुरुष २ हजार २ सय ५० जना छन्। संक्रमित महिलाको संख्या १ सय ८४ छ।
बिहीबार मात्र मुलुकमा थप ३ सय ३४ जना कोरोना भाइरसका नयाँ संक्रमित भेटिएका छन्। एकैदिन यति ठूलो संख्यामा संक्रमित फेला परेको पहिलो पटक हो।
कोरोना संक्रमणबाट तीन साताभित्र १० जनाको मृत्यु भएको छ। भारतबाट पाँच दिनअघि स्वदेश फर्केका पाल्पा, पूर्वखोला गाउँपालिका निवासी ४५ वर्षीय पुरुषको ज्यान गएको छ। दिनेश गाैतमले अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।